देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बिष्ट अनुस्थित हुनुको कारण के ? - UjyaloNepal
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बिष्ट अनुस्थित हुनुको कारण के ?
काठमाडौँ – कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर हुन लागेको रिट निवेदनमा एमालेको माधव नेपाल पक्ष २५ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
वैशाख २७ गते ओलीले विश्वासको मत लिँदा २७ जनाले अनुपस्थित भइ असहयोग गरेका थिए। शुक्रबार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै राष्ट्रपतिलाई सुझाइको पत्रमा नेपाल पक्षका २७ जनाले हस्ताक्षर गरे पनि रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने भने जम्मा २५ जना पुगेका छन्।नेपाल पक्षका एक नेताले गोकर्ण बिष्ट बिरामी भएको भन्दै अनुस्थित रहे भने अर्का एकजनाले साथ छाडेको अनुमान गरिएको छ।
संसदको लेखा समितिको हलबाट बाहिँदै नेपाल पक्षका सांसद झपड रावलले भने, ‘गोकर्णजी बिरामी भएकाले आउन सक्नुभएको छैन। अर्को एकजना साथीलाई पखाल लागेको छ रे!’ साथ छाडेको विषयलाई सांकेति रुपमा इंगित गरेका रावलले ती सांसदको नााम भन्न चाहेनन्।
त्यस्तै जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ जना सांसदले रिट निवेदनमाम हस्ताक्षर गरेको दाबी गरिएको छ। सांसद प्रदीप यादवले आफ्नो पक्षका १२ जनाले उपस्थित भइ देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर नागरिकता बुझाएको बताए। उनले भने, ‘हामी १२ जनाले हस्ताक्षर गरेका छौँ। अहिले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा छौँ। केही बेरमा सर्वोच्च जान्छौँ।’
त्यस्तै कांग्रेसका ६१, माओवादी ४८ र जनमोर्की दुर्गा पौडेलले पनि देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकी छन्। रिट निवेदन तयार पार्न संलग्न कांग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभाका १३६ जना चाहिने भए पनि १४९ जना पुगेका छन्।
शुक्रबार देउलाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दिएको दाबी र ओलीले १५३ जना सांसदको दाबी पेश गरे पनि राष्ट्रपतिले दुवैलाई अस्वीकार गरि प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो खोलिदिएकी थिइन्।
उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको दाबीसहित विपक्षी गठबन्धन बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिन लागेका हुन्। आइतबार संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा २५ वटा निवेदन पेश भएको छ।
आज शेयर बजारमा धेरै कमाउने १० कम्पनीहरु